RUBY Nkịta ụlọ akwụkwọ
Ndewo, a bụ m Ruby na abụ m nkịta ụlọ akwụkwọ. Abụ m onye ọkpọkọ. Adị m afọ 2 ugbu a, a na m abịa akwụkwọ kemgbe m gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nwa nkita mgbe m dị izu iri na abụọ.
Miss Noble na-elekọta m n'ụlọ ma na-akpọga m akwụkwọ kwa ụbọchị. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ ugbu a, ọ na-atọkwa m ụtọ mgbe anyị rutere. Mgbe mbụ m rutere ụlọ akwụkwọ, m na-abanye n'ọfịs ụlọ akwụkwọ. Ọ na-amasị m ịhụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile nọ ebe ahụ, ha na-elekọta m nke ọma.
Ọ na-atọ m ụtọ ịbịa akwụkwọ n’ihi na m na-ezute ndị enyi ọhụrụ mgbe niile, m na-egekwa ntị ka ụmụaka na-agụ ihe. Akụkọ ndị ahụ dị mma ige ntị, karịsịa ma ọ bụrụ na onye bụ isi bụ nkịta. Enwere ụfọdụ nnyocha na-atụ aro na mgbe ụmụaka na-agụrụ ndị nkịta ihe ha na-etolite na obi ike ya mere enwere m olileanya na m nwere ike inyere ụmụaka aka ịzụlite obi ike ha. Enwere m ike igwu egwu n'èzí, ụfọdụ ụmụaka na-akpọkwa m gaa ije. Mgbe ụfọdụ, mgbe ụmụaka na-ewe iwe, ndị nkụzi na klas ha na-akpọga ha ka ha hụ m ma ọ bụ kpọrọ m gakwuru ha. Ọ na-amasị m iche na m na-eme ka ahụ́ ruo ha ala n’ihi na m na-ege ntị nke ọma.
Anọla m na mmepụta ụlọ akwụkwọ. N'otu oge, m ga-eji ejiji dị ka mgbada. Ekwesịrị m iyiri antler mana m nọgidere na-adọpụ ha. Enwere m obi ike na-aga na ogbo n'ihu onye ọ bụla, anaghịkwa m agba egbe.
Ihe kacha amasị m ime bụ ịchụ bọọlụ ma ọ bụ ihe egwuregwu ụmụaka, rie nri na ige akụkọ.
Miss Noble kwuru na m ga-etinyekwu oge na klas ụfọdụ ugbu a m toro. Ma eleghị anya, m ga-amụta otú e si eme tebụl oge m, see ụfọdụ foto nke nkịta ma ọ bụ ọbụna dee akụkọ banyere nkịta, ma ugbu a, m ga-ahapụrụ gị nke ahụ!
Ka ilele ntule ihe ize ndụ nkịta pịa ebe a